Monday January, 17 2022 - 00:50:17
Wednesday May 15, 2019 - 14:32:26 in by salman abdi
KU: MADAXWEYNAHA JAMHUURIYADDA S/LAND.
KA: KUN NIN, OO DARARWEYNE, JOOGA.
Dabadeed, salaal iyo bariidayn, waxaanu dhamaantayo filaynaa, in warqadan furani kusoo gaadhi doonto. Waxaanu kale, oo rajaynaynaa in aad u heli doonto kansho aad Ku akhrisato, Ku lafa gurto odhaahaha aanu kuu soo dirnay. Sidoo kalena, waxaanu rajaynaynaa in wax waliba u dhacaan sida aynu doonayno, anaga iyo idinkuba IA, ( madaxweynaha iyo madaxda kale).
Tan iyo yaraantayadii, waxaanu maqli jirney kelmedo xanaf miidhan ah, oo aan u wacnayn maqalka. Musuq, cadaalad darro, saami-qaybsi, qof jeclaysi, eex, wax is-dabamarin iyo kun weedhood, oo kale, oo lamid ah ama ka daran kuwaa ayaanu Ku quraacan jirney, oo Ku qadeyn jirney, habeenkiina meelkasta kusii dhaafi jirney hadal hayntooda. Marmarka qaarna, qaybtayo waxaanu ka mid ahayn, dadkii arimahaas lafa guri jirey ee ka sheekayn jirey!
Qabiil-ku halkan kama shaqeeyo, ina hebelka wasiir dhalayna wuxuu la mid yahay; ka uu wastaadku dhalay ee aqoontiisu keentay Dararweyne. Waxaanu la kowsaney bilawga barnaamij siyaasadeedka, MAXAAD TAQAANAA?, oo lagaga guurayo kii dalka daashadey ee YAAD TAQAANAA!? Dadka halkan joogaa waa isku mid, waxaana la noqday; hal iyo hal aan haaf is dheerayn.
Iminka waxaanu filaynaa in wax waliba isbedeleen, indhaha ayaad noo furtay. Waxaanu aragnaa cadaalad laantu samayso tii ugu weynayd abid. Markaanu leenahay ugu weynayd waxa weeye:- inta midnaga mid ahi helay ayuu mid kasta, oo kalena helay. Ma jiro qof dheer qof kale malgacadi. Waxaa farxad noo ah, in aanu nahay kuwii ugu horeeyey ee barnaamijkan ka qayb qaata. Sharafbay noo tahay taasi.
Toban hurimood ayaanu nahay. Waxaanu ka kala soco-naa dalweynahan, oo dhan. Gobolna ma maqna. Mudane, Tababarka feedha-celinta ahi wuxuu si toos ah noogu bilawday; sideed iyo tobankii feebarweri. Adiguna, waxaad nasoo booqatay sadexdii maaraj, xoogaa waad nagasoo raagtey, dhibse malaha, oo hawlaha kale ayaa kugu badnaa. Ugu danbayn, maalintaas ayaad furtay dugsiga. Maalin nooc kale ah ayay ahayd axadaasi. Ruux cusub ayay na geliyeen kelmedahaagii iyo kuwii agaasimaha barnaamijkani. Mustaqbal qurux badan, oo nimcooyin badani Barbar yaacayaan ayay noo sawireen. Waxaanu rajayn in sawirkaasi run noqdo, oo aanu noqon; hadal afka uun laga yidhi, bartoodana lagaga dhaqaaqo. waxaanu rajaynaynaa in aanu ahaano kuwii ugu horeeyey ee dawladu maalgashatay, qarankuna u dhabar adaygay kun nin, oo meel laysugu keenay hawshooda. Waxaanu filaynaa in aanu tusaale u noqono kuwa kale eedabadayo halkan iman doona.
Waxaanu baranay:- samirkii, dulqaadkii, adkaysigii, ixtiraamkii iyo ismaqalkii. Dhamaantayo Mudane waxaa na biya dhigtay; dal jacayl iyo naxariis aanu dhexdayada isu hayno. Waxaanu aqoon u leeyahay gobol kasta, oo kamid ah gobolada dalka, mana jiro wax nagu seegan guud ahaan degmooyin ilaa magaalooyinkeena, oo dhan. Waxaanu yeelanay Hal magac, kaas, oo ah shaqa-qaran. Abtirsiinyo kale ma lihin aan ahayn kaas. Waana waxaanu Ku faraxsanahay, in qabyaaladii kala qoqobtay dalka iyo dadkaba agtayada ayka tahay wax uraya, oo aan nalagu soo ag qaadqaadin.
Ugu danbayn, gebegebadii ayaanu joognaa, waxa hadhsan wax aan ka badnayn laba wiig. Inta hadhay waxay nagaga feker badan tahay; intii hore, oo dhan. Sababtoo ah, mid walba, oo naga mid ahi wuxuu ka fekerayaa halkii uu tegi lahaa, kana hawlgeli lahaa. Waxaanu ka war qabnaa ama aad noo sheegteen in waxaas oodhan la diyaariyey. Hadana, ka fekerka timaadadu caqliyan waa wax waajib ah, oo aan laga dul boodi karin. Mudane, bilaw ilaa iminka, maadaama, oo wax waliba sida ugu wanaagsan u socdeen, waxaanu codsan in waxwalibana sida ugu quman Ku dhamaadaan, oo weliba, aanay hadhowna noqon; wax lakala badsado, lakala mudnaado, lala kala jeclaado.
W/Q: ina Walanwal
Dararweyne / Somaliland
16/01/2022 - 15:04:09
Daawo "Haay'adda Caymiska Qaranku waa Haayad ku cusub qarankeenna..." Gudoomiyaha Hayadda Caymiska JSL.
09/01/2022 - 17:11:30
Daawo: Kulanka Midowga Musharixiinta iyo Madashawa Wadatashiga Qaran
09/01/2022 - 17:03:15
Daawo: Guddihoosaadka Dabagalka Hantida Qaranka ee Golaha Wakiillada oo Musuq ku eedeeyey Hay'ado kamida Dawladda
02/01/2022 - 13:38:15
Daawo: Xildhiban Barkhad Batuun oo Farriin Direy + Maxay Tahay Farriintu?
31/12/2021 - 14:54:29
Daawo: Kulanka Saddex Biloodlaha ee Gudida Heerqaran ee Daryeelka Dadka qaba Xannuunadda Dhimirka oo furmay
20/12/2021 - 17:26:35
Daawo: Guddida Qandaraasyadda Qaranka oo Ku Dhawaaqay 8 mashruuc oo ay Hore u shaaciyeen.
18/12/2021 - 14:45:17
Daawo: Tvga Qaranka Iyo Golaha Wakiilada Oo Heshiis Dhexmaray
15/12/2021 - 14:34:18
Daawo "Nin Dalkan Madaxwaynanimo ka rabaa waa inuu Qarannimo Cod ku doonaa" Xildhibaan Barkhad BATUUN .
10/12/2021 - 22:09:14
Daawo: Xidlhibaan Siciid Cudhay oo Hargeysa lagu so dhoweeyey kana hadlay sicir bararka dalka ka jira, farriina u direy ganacsatada iyo xukumada
08/12/2021 - 23:47:13